हेमराज–आरुषी हत्याकाण्डः खुमकलाले दिइन सर्वाेच्चमा उजुरी, हाइकोर्टको फैसलाप्रति असन्तुष्टि
काठमाडाै । भारतमा भएकाे चर्चित हेमराज–आरुषी हत्याकाण्डमा हाइकाेर्टले गरेकाे फसला प्रति असन्तुष्टी जनाउदै हेमराज बञ्जाडेकी पत्नी खुमकला बञ्जाडेले सर्वाेच्चमा उजुरी दिएकी छन । यसअघि हाइकार्टले गरेकाे फैसला प्रति सिबिआईले असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वाेच्च अदालतमा अपिल गरेको थियो।
हत्याकाण्डमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) र खुमकलाकाे अपिलमा हाइकोर्टको फैसला बदर हुनुपर्ने र पुनः अनुसन्धान भई निर्णय हुनुपर्ने मागमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नयाँ फैसला सुनाउने भएकाे हाे । यसअघि हेमराज–आरुषी हत्याकाण्डमा दाेषी ठह्यार्इ अाजीवान जेल सुनाइएका तलवार दम्पतिलार्इ प्रमाणको अभाव देखाउँदै इलाहावाल हाइकोर्टले रिहा गर्ने फेसला सुनाएकाे थियाे ।
तर हार्इकाेर्टकाे याे निर्णय प्रति भारतिय अनुसन्धान ब्युराेले असन्तुष्टि जनाउदै पुनः अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राखेकाे थियाे । खुमकलाले न्याय माग्दै गत पुसमा भारतीय सर्वोच्च अदालतमा जाहेरी निवेदन दिएकी थिइन्। उनले दिल्ली पुगेर दर्ता गरेको निवेदन सर्वोच्चले ३ महिनापछि स्वीकार गरेको हो। उनले एक महिनाअघि फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकी थिइन्। सुरु अदालतले दोषी ठहर गरेको र हाइकोर्टले त्यसलाई उल्टाएकाले सर्वोच्चले त्यसमा पुनः सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको हाे।
खुमकलाले दर्ता गरेको निवेदनमा हाइकोर्टको फैसला गलत भएको उल्लेख गरिएको छ। हाइकोर्टले आफ्नो पतिको हत्या भएको स्वीकार गरेको तर कसैलाई दोषी ठहर नगरेकाले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर भई तलवार दम्पतीलाई सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ। सिबिआईले दर्ता गराएको निवेदनमा पनि हत्याको समयमा उपलब्ध व्यक्ति नै हत्यारा हुने सिद्धान्त नमानेकाले फैसला उल्टाई तलवार दम्पतीलाई सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ। अन्तिम समयमा जलवायु विहारमा तलवार दम्पती सँगै रहेको उनीहरुले बयानमा स्वीकार गरेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
के हो हेमराज–आरुषी हत्याकाण्ड?
अारूषी हेमराज हत्याकाण्ड भारतमा भएकाे सबैभन्दा जघन्य र रहस्यमय हत्याकाण्ड भएकाे मानिन्छ । जुन २००८ काे मे १५ र १६ मा भारतकाे जलवायु विहारमा भएकाे थियाे । डेन्टिस्ट राजेश तलवारकी १४ वर्षीया छोरी आरुषी र उनको घरमा काम गर्ने नेपाली हेमराजको बञ्जाडेकाे तलवार निवासमा हत्या भएको थियो। उक्त हत्याकाण्डमा अारूषीकाे अाफनै घरमा हत्या भएपछि उनका बावुअामा अर्थात तलवार दम्पत्तिले हत्यामा हेमराजलार्इ दाेषी ठह्याएका थिए । तर भाेलीपल्ट अर्था मे १६ मा हेमराजकाे शव उनकै घरकाे छतमा भेटिएपछि हत्याकाे अाराेपमा तलवार दम्पत्तिलार्इ जेल चलान गरीएकाे थियाे ।
यस घटनाले समय समयमा धेरै मोडहरू लियाे। हेमराजका साथीहरू अाएर अारूषीकाे बलात्कार पछि हत्या गरीएकाे र त्यसपछि हेमराजकाे हत्या गरीएकाे भनियाे । तर मिडियाकाे निरन्तर हस्तक्षेप गर्न थालेपछि सिअाइबिले अनुसन्धान थालेकाे थियाे । हत्या पुष्टिका लागि ड्राइभर उमेश शर्माले अदालतमा बयान दिएको बयान अनुसार पनि हत्या भएको रात कुनै पनि नयाँ व्यक्ति तलवार निवासमा नआएकाले उनीहरुले नै हत्या गरेको पुष्टि गरेका थिए । २००८ मे १५ मा आरुषीको हत्या भएको थियो भने मे १६ मा नेपालका हेमराजको शव भेटिएको थियो। उक्त समयमा निवासमा तैनाथ भएका सुरक्षागार्डले छोटो अवधिमै दुई हत्या भएको र घरमा अन्य व्यक्ति प्रवेश हुन नसक्ने र प्रवेश गरेको आफूलाई जानकारी नभएको भनी बयान दिएका थिए ।
२६ नोभेम्वर २०१३ मा सीबिआईको तल्लो अदालतले तलवार दम्पतीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। तलवार दम्पतीले आरुषी र हेमराजलाई आपत्तिजनक अवस्थामा देख्दा आवेगमा आई हत्या गरेको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको थियो। तर तलवार दम्पत्तिले भने अाफुहरू निर्दाेष रहेकाे बयान दिदै अाएका थिए ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, चैत ०६, २०७४१२:४७
यादव र राई मन्त्री नियुक्त ! कुन कुन मन्त्रालयको पाए जीम्मेवारी
काभ्रेपलाञ्चोकमा निजी आवास पुनःनिर्माणका लाभग्राही भट्टाभट रकम फिर्ता गर्दै !
काठमाडौँबाट गएको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु ! ठक्कर दिने सवारी पत्ता लागेन !
५१ मिनेट अगाडि PARWATI